ODUU AMMEE ! AMBOOtti guyyaa har’aa Mormiin Cimaatu gaggeeffamaa jira! – Kichuu
[ September 22, 2021 ] Biyyaa Hin Baatu Taanan Si Ajjefna Jedhan”!! Obbo Lammaa Magarsaa	Radio
[ September 22, 2021 ] Reported heavy fighting inside of Gondar city	Africa
[ September 22, 2021 ] Tarkaanfii WBO Amma Nugahe fi PPn Milishaatti Uffata RIB Uffiste Lolati Ergu	Radio
[ September 22, 2021 ] Concern grows over where about of jailed Oromo political prisoners!	World
HomeAfaan OromooNewsODUU AMMEE ! AMBOOtti guyyaa har’aa Mormiin Cimaatu gaggeeffamaa jira!
ODUU AMMEE ! AMBOOtti guyyaa har’aa Mormiin Cimaatu gaggeeffamaa jira!
ODUU AMMEE! AMBOOtti guyyaa har’aa Mormiin Cimaatu gaggeeffamaa jira!
~ Daandii guutumatti Cufameera!
~ Sochiin geejjibaa guutumatti daabateera!
~ Manneen daldalaa, Suuqiin, Baankiin, Mannaraa, Waajjiraaleen Mootummaa guutumatti cufameera!
“Hanga hidhaa, ajjeechaa, Mirga Abbaa biyyummaa keenya kabajamu qabsoo itti fufnu” Qeerroo Amboo irraa!
ብልቅጥና እንግሊዝ ጨው ጠጣ!
Furmaata Waliigalaatiif Hojjechuutu Nageenya Biyyaa fi Lammiilee Mirkaneessa (Ibsa ABO – Gurraandhala 22, 2020) https://t.co/ZbfOPYmekW pic.twitter.com/qX11Zd2pU7
— Kichuu (@kichuu24) February 22, 2020
Kan Sangaan Iyyuu qabu Qanceen iyyee jedhama.
Yaa jarana Lubbuu nama keenyaatiin taphuu dhiisaa.
Amboo !! Amboo tti deeggarsi sobaa Opdon ammas waan akka uummanni ishii deeggaruu fakkeessuuf umna qawwee fi durgoo guddaa rabsame qofaan gaggeeffamaa ture irratti Qaama Hin beekamneen Boombii darbatameen miidhaan guddaan qaqabee jira.
Amma umna waraanaa ti moo uummata Amboo ti hiriira bahee jedhama warri Fagoo irraa ilaalan ??
Umni waraanaa Guuyyoota lamaa dura irraa calqabee Amboon guutuu ishii marsee ummanni Amboo akka Asphaltti tti bahee Hin sochoone dhorkee warra Bakka biraa (Aanoota) Godinichaa guutuu irraa durgoon Amboon Gama kana qofaaf weeraree Awwaara kaasuun deeggarsa umna Waraanaa Abdeteen jiraachuu Opdo ummata oromoo bira tti jireenya sobaaf Har’a kunoo gadii bahee TV fi walga’ii irratti ittiin dhaadachuuf yaalii itti Hin fufne godhameera. Garuu Hundee fi dhugaa Hin qabdu. Guutuu oromiyaa Garuu durgoon of filchiisuun Hin yaadamu. Ofiinuu duutii maaliif of huuti jedhama. Hiriirri sobaa Abiy deeggaruuf jedhame utoo uummanni Amboo Hin beekne Guyyaa har’aa 15/6/2012 Amboo irratti gaggeessuuf durgoo guddaa Nama tokkoof qarshii 1000 kaffalanii .
Warra motorcycle tiif Nama tokkoof qarshii 500 kennaniif. Dabaltaan Konkolaataa kiraa qopheessaniifii kaabinoota/dabballoota / saamtuu durii Aanoota Biraa irraa fi qotee buloota Farda qaban qarshii 300 fi biraa,Laaqana isaanii guutuun fi Buufata konkolaataa Amboo tu eebbifama jechuun yaamamtanii jechuun Yaroo Amboon seenan gara deeggarsa hiriiraa godhame. Deeggarsa wal makaa fi gocha sobaa maqaa uummata Amboon daldaalamaa jiruuf uummanni haarii fi xiiqii keessa galeera.
Qerroowwan Gocha badaa kana mormuuf gad bahanii calqabii godhanii uumna waraanaa guddaa itti erganii bittimsuun Sochii dhorkaanii jiru.
Umna guddaa waraana Mootummaa wal makaa 8000 oliin marfamee hidhate Amboon kaambii waraanaa fi Dirree waraanaa fakkattee doorsifamuu guddaatu gaggeeffamee jira.
Umni Magaalaa Amboo maaltu akka gaggefamu dhoksaanii garee basaastootaa fi Kaadiroota moofaa durii dhoksaan qarshiin hirmeef umna qawween eegamaa sirbaa gara biraa irraa kan Magaalaa Amboo seenan qofatu Har’a ilaalamaa ture. Uummanni Amboo akka haaraatti maalinnii jedhee daandiitti yaa’ee ilaalee gara mana isatti deebi’ee kolfaa ture.
Maaliif dhoksaan dkokatanii itti dhiphatu ???
Toftumaa durii fi warruma duriitu lafa dhitee sirbaa jiraa edaa jedhe uummanni .
Eenyuun goyyoomsuuf deemaa jiruu ??
Maal haa baasuuf dhama raasuu warri Opdo dullatti ??
Ammas oromoo bituuf ??
Hundaafuu Opdon sodaattee oliifii gad fiiguun kaasaaraa malee lammata oromoo bituun dhumeefiira.
Hagasitti haa yaalani. Qaama Hin beekamneen Boombiin harkaa warra abbaa Fardaa qarshiin bitamanii sirbaa turan irratti Naannoo mana hoteela Melkaa duratti fudhatameera.
Namni baayyeen yaroof 16 hanga 50 guutan miidhamanii hospitala Amboo galaniiru.
Ammaaf lubbuun Namoota 3 darbuu keessa beektonni ogeessonni Fayyaa ragaa bahaa jiru.
Sababa kanaan Namootiin nagaa umna waraanaan jimlaan daandii irraa guuramanii mana hidhaatti guuramaa jiru.
Jaarmoolee oromoo deeggarsa uummataa qabaniif Qeerroowwan jijjirama kana fide hidhaatti jilmaan guuraa Yaroo uummanni keenya ABO fi KFO deeggaruuf qophii qabu umna waraanaan dhorkaa jiru.
Yaroo Opdon umna qaawwaee fi durgoo qabeenya uummataa itti dhangalaasaa Namoota bakkee biraatii konkolaataa kiraa fuufhaniif hiriira sobaa qopheessuun Opdon akka waan deeggarsa uummataa qabuu fakkeessu. Dhiigni uummata oromoo akka lukkuu faasigaa dhangala’aa ture Garuu Bilisummaa dhugaa uummanni keenya itti afuura galfatuuf malee Opdo gantuu harka dhiigaa Aangoo irratti tiksuuf miti.
Hidhaa ,ajjeechaa fi Boo’iichi ilmaan oromoo akkuma dur itti akka fufu Hin turre.
Qabsoo Qeerroo karaa irraa maqee Diina gantuu Opdo fi ilmaan Nafxanyootaa jalatti galee Qabsoo Qeerroo itti mudduun dirqama fi furmaanni biraa Hin jiru. Alkaanii Guyyaa wal kurfeessaa.Kan gurma’ee haqa qabatee Qabsoo dursee itti muddee caalee argame Ni injifata.
Jibaa fi oduu qofaan teenyee ilaaluu qofaan Injifannoon mana keenyaatti nuuf kennamu Hin jiru.
Diinoota keenya warra harka dhiigaan mo’atamnee Garbummaa jalatti Hin deebinu !!
Ni falamanna !!
Ni Injifanna !!
Tooftaa Amaarri Ittiin Finfinnee Keessatti Hiriira Waamaa Jirtu Kana Dhageessanii?
Eritrea’s PIA has experience in meddling in internal affairs of the neighboring countries for long time
Biyyaa Hin Baatu Taanan Si Ajjefna Jedhan”!! Obbo Lammaa Magarsaa
Reported heavy fighting inside of Gondar city
Tarkaanfii WBO Amma Nugahe fi PPn Milishaatti Uffata RIB Uffiste Lolati Ergu
Concern grows over where about of jailed Oromo political prisoners!